Tuesday February 18, 2020 - 10:47:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Duqeyn hor leh oo diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen gobolka Jubbada dhexe ayay dad shacab ah ku waxyeelleeyeen.
diyaaradaha Drone-ka USA ayaa xasuuq ku haya shacabka Soomaaliyeed
Wararka ka imaanaya degmada Jilib ayaa sheegaya in diyaarad Drone ah ay shalay gelinkii dambe duqeysay guri dad shacab ah deganaayeen, majirin khasaara nafeed oo ka dhashay duqeynta balse waxaa ku dhaawacmay laba qof shacab ah oo uu kamid yahay canug yar oo kamid ahaa dadkii guriga deganaa.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in gantaallada ay diyaaraddu tuurtay ay burbur ugeysatay dhismayaal waxaana dhaawac fudud uu soo gaaray oday waayeel ah iyo gabar yar oo kamid aheyd dadkii guriga ku sugnaa.
Dhinaca kale taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ayaa war uu soo saaray ku sheegtay mas'uuliyadda Xadgudubkan ka dhanka ah dadka shacabka ah ee ka dhacay Jubbada dhexe.
War qoraal ah oo AFRICOM faafiyay ayuu ku sheegtay in ay duqeeyeen xarun ay lahaayeen Al Shabaab balse sheegashadaas ayaa ah mid been ah, guriga la duqeeyay waxaa ka deganaa dad shacab ah, Alle mahaddiis waxaa aad u yaraa khasaaraha ka dhashay duqeynta.
Dowladda Mareykanka ayaa bilihii lasoo dhaafay dad shacab ah ku xasuuqaysay diyaaradaheeda aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka loo yaqaan, hay'adda Amneysty ayaa warbixinno dhowr ah oo ay soo saartay ku xaqiijisay in Mareykanku gummaad ku hayo shacabka soomaaliyeed isagoo ku marmarsiyoonaya ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada.